न्यायको पक्षमा बोल्दा पुण्यलाई जे’ल ? जर्नेलले उ’जुरी हालेपछि पुण्य र माला पुगे टेकुमा (भिडियो सहित) – ताजा समाचार
न्यायको पक्षमा बोल्दा पुण्यलाई जे’ल ? जर्नेलले उ’जुरी हालेपछि पुण्य र माला पुगे टेकुमा (भिडियो सहित)
अहिले दु:खमा रुमालिएकी छिन् माला शाह जो १५ बर्षसम्म नेपाली सेनाबाट बरखास्त भएका जर्नलले मोजमस्ती या भनौ उनीसँग सम्बन्ध राखेर प्रयोग गरे तर जब अहिले घर लाने बेला आयो एकाएक कहा गए कहा ?
एउटी सोजी साझी महिला माला शाहलाई नेपाली सेनाका जर्नेल हेम खत्रीले अनेकौं धम्कि दिएर आफुलाई बिहे गर्न बाध्य बनाएको उनले बताएकी छिन् । आफुसँग बिहे नगरे श्रीमान र बच्चालाई समेत मर्ने धम्कि दिएर १५ वर्षसम्म आफुसँग बस्न बाध्य गरेको खुलाएकी छिन् ।
आज मात्र संचार माध्यममा कुराकानी गर्दा माला र जर्नल हेम खत्रीकी घरबेटीले सम्पूर्ण वृतान्त बताएकी थिईन् । आजै मालाका पति हेमले पुण्य गौतम बिरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गराएका छन् । मुद्दा दर्ता भएपछि टेकु पुगेका पुण्यले सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्दा सजाय हुन्छ भने त्यो पनि भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला :